Dehydrated versus Freeze Dried - Hiroborobo Best mandry maina Sakafo
Miroborobo mandry sakafo maina / By Admin
Dehydrated VS. Atao maina
Maro no mihevitra fa ny vokatra maina mangatsiaka sy ny vokatra tsy misy rano dia mitovy. Na dia samy tsara ho an'ny fitahirizana maharitra sy kitapo vonjy maika aza izy ireo, hafa ny "fiainana mahavelona" azy ireo, toy ny fomba fitehirizana azy ireo.
hamandoana: Ny fanamainana mangatsiaka dia manala ny 98 isan-jaton'ny hamandoana amin'ny sakafo, raha manala ny tsy fahampian-drano manodidina 90 isan-jato.
fiainana talantalana: Misy fiantraikany amin'ny andro fitehirizana ny hamandoana, miaraka amin'ny sakafo maina mangatsiaka maharitra eo anelanelan'ny 25 SY 30 taona, ary vokatra tsy misy rano maharitra eo ho eo 15 ny 20 taona.
sakafo: Ny sakafo maina mangatsiaka dia mitazona ny ankamaroan'ny vitaminina sy mineraly voalohany amin'ny vokatra vaovao, fa ny dingan'ny tsy fahampian-drano dia afaka mamotika mora foana ireo otrikaina ireo.